> Resource> Alternatives> PhotoRec Alternatives na Yiri Software maka Windows
Ọ bụrụ na ị na mberede ihichapụ anya foto site na kọmputa gị, na-agbake ha ga-adị a hassle. Ị mkpa a ọma software omume na bụ ike nke na-agụ na-ehichapụ data na-agbake ya na draịvụ ike gị, enweghị na-eme n'ihu mmebi ma ọ bụ overwriting ọ bụla ugbu data. N'ihi na Windows, e nwere ọtụtụ dị iche iche na omume na ugbu a na-enye data mgbake arụmọrụ, na nke kacha mma n'etiti ha na-kwuru n'okpuru ebe a:
PhotoRec ọzọ maka Windows 1: Recuva
PhotoRec ọzọ maka Windows 2: Photo Recovery
PhotoRec ọzọ maka Windows 3: Data Recovery
PhotoRec ọzọ maka Windows 4: Dr.Fone maka iOS
A oké PhotoRec ọzọ, Recuva emeela otuto n'ihi ịbụ ìhè arọ data mgbake ngwá ọrụ. Recuva bụ ike nke na-agbake dum partitions, nakwa dị ka ụfọdụ faịlụ formats dabere n'elu gị nkọwapụta. Usoro ihe omume dị na a free, na bụ dakọtara na ma Windows na Mac. Ebe a bụ ụfọdụ isi atụmatụ:
- Preview faịlụ n'ihu gị naghachi ha.
- U omimi ma ọ bụ ngwa ngwa Doppler nhọrọ dị.
- Họrọ si dị iche iche dị iche iche faịlụ formats naghachi.
- The interface bụ nnọọ mfe iji, na kwesịrị ekwesị nkọwa maka onye ọ bụla edinam.
1. Free data mgbake omume
2. Ntụle faịlụ maka mfe ego na mgbake
3. Data natara n'ime nkeji
1. Ịgụ isiokwu nwere ike na-ezi a mgbe
2. Nwere ike okuku na ịkpata ọnwụ nke data
Wondershare Photo Recovery Bụ oké omume na bụ dakọtara na Windows 8 dị ka mma. Nke a bụ oké PhotoRec dochie anya ndị ọ dị mkpa a dị mfe omume na-abịa na a ndu onye ọrụ interface. Ebe PhotoRec na-arụ ọrụ isi site a ọnụ, Wondershare Photo Recovery achọ ị na-akpa wụnye ihe omume na ahụ na-eji ya site na ya interface, nke dị oké anabata na mfe iji. Ebe a bụ ụfọdụ isi atụmatụ:
- Ọ pụrụ naghachi music na video faịlụ dị ka mma.
- Ebe ọ bụ a na-akwụ ụgwọ ihe omume, ahịa nkwado dị mma.
- Kwekọkwara Mac OS X.
- adịghị eri elu na kọmputa ego.
- Na-egosi foto si thumbnails na-enye ohere gị aka ịhọrọ ya tupu ewepụta faịlụ.
1. Niile ụdị photos nwere ike natara
2. -Enye gị ohere ịhụchalụ faịlụ
3. Nwekwara ike naghachi data si mpụta nchekwa
1. Naanị naputa photos, vidiyo na ọdịyo
The Wondershare Data Recovery omume bụ nnọọ mma PhotoRec nnọchi maka ndị na-adịghị achọ ka omume ugha na a ọnụ ha na kọmputa. Ọ nwere ezigbo mfe iji interface na-abịa na a zuru ezu Help menu. Ị na-adịghị mkpa ka a ọkà data mgbake iji rụọ ọrụ a usoro. Ebe a bụ ihe kacha mma na atụmatụ nke Wondershare Data Recovery:
- Bụ ike nke na-agbake karịa 550 faịlụ formats.
- Trial version-enye gị ohere iji naghachi 100 MB nke data.
- Ebe ọ na-eji na-agụ naanị ụzọ, na n'ihe ize ndụ bụ ntakiri.
- Nwere 4 dị iche iche mgbake ụdịdị.
- Dakọtara na Windows 8.
1. -Arụ ọrụ na a dịgasị iche iche nke dị iche iche formats
2. Kemgwucha mfe iji wụnye
3. Nwere ike naputa data na nkeji
1. Dịghị onye! Na-eme ya n'ụzọ dị irè ọrụ
The Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) na-enye PhotoRec dochie, ikwe ọrụ naghachi faịlụ dị ka vidiyo, photos, kọntaktị, ozi, na ndị ọzọ, si ha iDevice. Ebe a bụ ụfọdụ top atụmatụ:
- Dakọtara na niile ọhụrụ iDevices elu nke iPhone 3GS.
- Data ndabere dị nnọọ ngwa ngwa.
- Naghachi 14 ụdị nke ehichapụ data enweghị ọbụna ihe iTunes ndabere.
1. Recovers ehichapụ iPhone data na nkeji
2. Ike wepụ backups nakwa
1. Na-arụ ọrụ maka iOS ngwaọrụ.
FFMPEG Alternative: A Faster-eme-All Video Ntụgharị
Best Format Factory Alternative: More Dynamic, More Formats, tọghata Faster
Best Dr. DivX Alternative: tọghata Video, Dezie Video, Ọkụ DVD
Ọ bụla-atụ aro VirtualDub Alternative?